ဆၧလ့ၩလၧတဝၫ့အ့ၫမ့အၧၭ. | Radio Veritas Asia
ယိခွါ, လၧအဝ့ၫၥံၪအကျၩၦနံၫဂၩ လ့ၩဆၧလၧမုလနံၩဎးနီၪ လၧတဝၫ့လဖျိၪ့အမံၩ့ မွဲအ့ၫမ့အၧၭယဲၩ့လၧယရုစလံၫ့ စတ့ဒအၧၫ့ဎူၫဆံၫလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪချဲၩ့ဒုၪ့လိၬအၥၭ လၧဆၧမၩအၥၭနီၪ အဂဲးအကၠီၪ့ထီးအလူၬလီၫ.
ဆၧမၩအၥၭထီးအချဲၩ့လိၬအၥၭ ဒဲအၪ့စၪ့လိၬအၥၭ အဘိၩ့ဘၭနီၪ, ယ့ၫၡုၬၥုၭဘူၭထၪ့အၥၭတၭ, လ့ၩဆၧလၧအဝ့ၫၥံၪအၥိၭလီၫ.- ဆၧမၩကဒၩအမ့ၬ ဘဲၫၥိၭအထီးၥ့ၪယၫအဝ့ၫလဂ့ၩလီၫ.-
အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ, နၥံၪလ့ၩဆၧအဘိၩ့ဘၭတၭ, နၥံၪချဲၩ့လိၬနၥံၪအၥၭယီၩ, မွဲဆၧချဲၩ့ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. တၭနၥံၪအမ့ၬလၩ့ၡါ မွဲဘၪလဲၪ.- အလဂၩအမံၩ့စကျံအိၫဖၭနီၪ ချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ, စံၭအဝ့ၫနီၪ, နဝ့ၫဒၪယီၩ, နမွဲန့ၫၦမွံၩလၧ ယရုစလံၫ့အဖၧၩ့တၭ, ဆၧမၩအၥၭလၧမုနံၩလဖၪယီၩ မွဲနၥ့ၪယၫအ့ၬဧၪ.-
အဝ့ၫဒၪလဂၩစံၭအဝ့ၫၥံၪ, မွဲဆၧနီၪလဖၪလဲၪ. အဝ့ၫၥံၪစံၭဆၧၫ့ဝ့ၫ, မွဲၦနၭဇရ့ၭဖိၪ ယ့ၫၡုၬအဂဲးအကၠီၪ့လီၫ. အဝ့ၫနီၪ, မွဲမီၪလဂၩအီၪ လၧအစီၩ့အမၩ့ လၧအလူဒဲအဆၧမၩ လၧယွၩအမ့ၬယၫ, ဒဲလၧၦၡၩထီးအလူၬအမ့ၬယၫလီၫ.- ဘဲၫၥိၭ အမိထိးဆၧစ့ၩရၫ့ထီးအၥံၫတၭ, ၦလုဆၧအခိၪ, ဒဲၦဒိၪၦၡါလဖၪနီၪဖ့ၪလၫ့ၥံၫခွံၬဝ့ၫ, ဒဲဖျၩထၪ့အဝ့ၫ လၧထုၪ့စူၪယၫအလီၩ့လီၫ.- အ့ၪမွဲပယိလါလၧအဝ့ၫနီၪ မွဲဝ့ၫၦလၧအမိထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ ၦအံၫစရ့လၭ ဖိၪၥံၪလီၫ. တၭလၧဆၧနီၪလဖၪ ထီးအလူၬအမ့ၬယၫ, လၧဆၧမၩအၥၭဘဲၫနီၪလဖၪအလးခဲၫ့, အယီၩလနံၩ မွဲမုၥၧၫ့နံၩလနံၩလီၫ.- တၭၦမုၪလၧပကျၩလနၩ့နၩ့ လ့ၩလၧဆၧၥွၪခိၪအအီၪဂီၩဂီၩလ့ၬနီၪ,- လဒၪဘၪအစွၪတၭ, ဂဲၫထဲၩ့လီၩဘၪဝ့ၫလၧ အဒၪဘၪဆၧလမံၩ့အၥီၫ့ၥံၪလၧအစံၭ, အဝ့ၫလဂၩမၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫတၭ, မၩထီၫမံၫထီၫမၪပၥၭလီၫ.- ၦလၧပကျၩလနၩ့နၩ့ လ့ၩလၧဆၧၥွၪခိၪတၭ, ဒၪဘၪဆၧဘဲၫၦမုၪစံၭဝ့ၫအၥိၭ လါနၫ့ဘိၩဒၪဘၪအဝ့ၫနီၪလဂၩဆ့အ့ၬ.
ထီးနီၪလဖၧၫ့အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ, ၦလၧအၥၭလဖၭဘၪ, ဒဲၦလၧအလနဲၩဘၪမီၪအလူၥံၪဧ့,- ဎရံၬ ဘၪထိးဆၧဘဲၫနီၪတၭ, လ့ၩနုၬထၪ့န့ဘၪအလၩအဖၩ့နီၪမွဲအ့ၬဧၪ.- တၭအဝ့ၫဒၪလီၩဆိၫဝ့ၫ လၧစမိ စ့ၭဒဲမီၪလဖၪထီးအလူၬနီၪ, ဒုၭနဲၪမၩဖျီၪထၪ့ဆၧဘၪဆဲၫ့ လၧအနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫအဂဲး ဘဲၫအအီၪလၧဆၧကွ့ၭအၥၭ ထီးအလူၬအဖၧၩ့လီၫ.-
အဝ့ၫၥံၪလ့ၩဘူၭထၪ့ လၧတဝၫ့လၧအမိလ့ၩဝ့ၫနီၪ, အဝ့ၫဒၪမၩအၥၭလၩ့ဂၬ လၧအမိလ့ၩဒံၭလၧယၫလခီၫလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪအၪ့ ကံၩ့အၪ့ယၫဝ့ၫဆီၪ့ဆီၪ့လ့ၬ, စံၭဝ့ၫ, အီၪလၧပၥိၭဘီၪ. အဂဲးဘဲၫယီၩမုဂၪလၩ့တၭ, မုဘၪယူၭး တၭအဝ့ၫဒၪလ့ၩနုၬအီၪလၧအၥိၭလီၫ.
ဆၧမၩအၥၭလၧအဆၧၫ့နၩ့ဒံၩ့ခံၫ့ လၧစပွဲထံၭလၧ အဝ့ၫၥံၪအၥိၭတၭ, အဝ့ၫဒၪမၩန့ကိၪ, ဆိၪဂ့ၩကံၪ့ဘျ့ၭဝ့ၫတၭ, ဖ့ၪလၫ့အဝ့ၫၥံၪလီၫ.- အဝ့ၫၥံၪအမ့ၬၥၪ ဝဲထၪ့အၥၭတၭ, ၥ့ၪယၫဝ့ၫလီၫ. အဝ့ၫဒၪမၩလၩ့မါခွံၬအၥၭ လၧအဝ့ၫၥံၪအမ့ၬယၫလီၫ.-
အဝ့ၫၥံၪချဲၩ့လိၬအၥၭတၭ, စံၭဝ့ၫ, လၧအဝ့ၫနီၪချဲၩ့လိၬအၥၭလၧပၧၩ လၧဖၧၩ့ၥၭနီၪ, ဒုၭနဲၪဆၧကွ့ၭအၥၭအဂဲးအကၠီၪ့တၭ, ပၥၭလၧပဂူၭဖိၫ့ဖၧၩ့ မွဲအခဲၩထၪအ့ၬဧၪ.
အဝ့ၫၥံၪဂဲထုၪ့လၧနၩရံၩထီးနီၪ, ထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလၧယရုစလံၫ့တၭ, ဒၪဘၪဝ့ၫလၧၦဆံၫလဂၩ, ဒဲၦအီၪလၧအၥိၭအီၪကိၩ့အီၪကီၪ့,- စံၭဝ့ၫ, ကဆါနီၪဂဲထုၪ့ထဲၩ့တၡါတၭ, ဒုၭနဲၪယူၭအၥၭလၧစစဲမၧၫ့ယူၭ.- တၭအဝ့ၫၥံၪလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧမၩအၥၭလၧဖၧၩ့ၥၭနီၪ, ဒဲအဝ့ၫဒၪဒုၭၥ့ၪယၫအၥၭလၧ အဝ့ၫၥံၪ, ဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ လၧဆၧကံၪ့ဘျ့ၭကိၪနီၪလီၫ.